Akwụkwọ ahịa maka ndị mbido - Mee oke uru! Ọnwa Nke Anọ 2021
Mụọ 2 Ahịa 2021 Ntuziaka Na Ahịa Akwụkwọ!
Tradingzụ ahịa akwụkwọ bụ usoro ịzụrụ na ire akụ site na akaụntụ ngosi ngosi dị ndụ. Ga-eme nke a site na onye na-ere ahịa n'ịntanetị na naanị ebumnuche nke ịmegharị ọnọdụ ahịa ụwa na-enweghị itinye isi obodo gị n'ihe ize ndụ.
Nke a bara uru n'ihi ọtụtụ ihe. Dịka ọmụmaatụ, akụkọ azụmaahịa akwụkwọ dị oke mma maka gị nke na enwetụbeghị ahụmịhe nke etu esi etinye ego na ntanetị.
N'otu aka ahụ, usoro ahụ na-enyekwa aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale atụmatụ ọhụrụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọ ịtụle ịdị irè nke robot trading robot.
In our Mụta 2 Trade 2021 Ntuziaka Na Akwụkwọ ahịa, anyị na-akọwa ihe niile enwere ịmara banyere akụkọ ngosi ndụ. Anyị na-enyekwa gị usoro ntụpụ ụkwụ otu esi amalite site na ikpo okwu azụmaahịa akwụkwọ, yana ndị ahịa ise kachasị mma iji nke a.
Gịnị bụ Akwụkwọ Trading?
Na nkenke, ahia ederede na-ezo aka n'usoro nke ịzụrụ na ire ere ego n'ejighị ego ọ bụla. Kama nke ahụ, ị ​​ga-azụ ahịa na akaụntụ ego ngosi site na onye na-ere ahịa n'ịntanetị. Ebumnuche dị oke mkpa bụ ịnwale ọnọdụ ọnọdụ ụwa n'ezie na gburugburu ebe obibi na-enweghị ihe egwu. Na imirikiti nke ikpe, ị ga-mkpa na-eji ihe online ore iji nweta ohere a akwụkwọ trading akaụntụ.
Nke a pụtara na ị ga-mkpa na-emeghe a ngosi akaụntụ na ore ahia, nke n’aka nke, kwesịrị-enye gị ozugbo ohere ahịa. Nke a ga - abia n'ụdị ikpo okwu ntanetị ị nwere ike ịnweta site na ihe nchọgharị gị, ma ọ bụ sọftụwia ịzụ ahịa desktọọpụ MT4/ MT5. Kedu ụzọ ọ bụla, ihe niile ị hụrụ na ikpo okwu akwụkwọ gị ga-ahụkarị ihe na-eme n'ahịa ahịa ụwa.
Kedu ihe bụ uru na ọghọm nke akwụkwọ ahịa?
Perfectzọ zuru oke iji mụta otu esi arụ ọrụ n'ịntanetị
Ikwesighi itinye ego ma obu tinye ego gi
Ọ dị mma maka ịnwale usoro azụmaahịa ọhụrụ
Muta ka ndi oru oru na-aru oru
Ike ịnwale-ịkwọ ụgbọala usoro ịzụ ahịa akpaaka
Ọ dị mma maka ịnwale ndị na-enye ọrụ mgbama
Enweghi ike ịnweta mmetụta mmetụta uche nke ịhapụ ego
Nwere ike itinye ihe egwu karịa ka ị ga-eme mgbe ị na-eji ego akwụkwọ
Isnye bụ Akwụkwọ Ahịa Kwesịrị Ekwesị?
Emehiela banyere ya - usoro ntanetị akwụkwọ abụghị dị nnọọ maka newbie investors. N'ụzọ megidere nke ahụ, ha na-enye ụzọ dị irè iji nwalee ọtụtụ usoro na usoro azụmaahịa na gburugburu ebe obibi na-enweghị ihe egwu.
N'okpuru ebe anyị depụtara ụfọdụ n'ime ọtụtụ ihe kpatara ị ga - achọ iji tụlee onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke na-enye ebe nchekwa akaụntụ ngosi zuru oke.
Ọhụrụ maka ahia
Ebumnuche doro anya bụ ndị na-enwechaghị ahụmịhe nke etu esi arụ ọrụ n'ịntanetị. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ na ịnwetụbeghị ịzụta ma ọ bụ ire ahịa tupu iji ego ụwa, ọ ga-akacha mma ka ị malite na akaụntụ ahịa azụmaahịa. N'ime ime nke a, ị nwere ike ịmụ ins na out nke etu esi arụ ọrụ ntanetị n'ịntanetị na-arụ ọrụ na gburugburu ebe nchekwa na-enweghị ihe ọghọm 100%.
Ihe ị nwere ike ịmụta site na ịzụ ahịa akwụkwọ bụ:
Nke mbu, akuko ahia ahia gha enyere gi aka inweta nghota siri ike banyere otu uzo iwu ahia si aru oru. Nke a na-agụnye ihe niile si zụrụ na ere iwu, ịgba iwu, ịkwụsị-ọnwụ iwu, na-uru-iwu, na trialling nkwụsị-ọnwụ iwu. Orderdị usoro ndị a na-anọdụ ala na isi nke ntanetị n'ịntanetị - dịka ọ na-eme ka onye na-ere ahịa mara ihe ọ bụ ị na-achọ inweta.
Ozugbo ịchọpụta etu iwu ahịa si arụ ọrụ, ị kwesịrị iji oge ụfọdụ tụlee usoro ahịa. Nke a ga - enye gị ohere kachasị mma nke ịghọta otu ngwa ọrụ na - esi aga ahịa ahịa.
Ihe ndekọ ederede ahịa dị oke mma maka iwulite usoro njikwa ihe egwu gị. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa nke usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị dịka iwu gị kwesịrị ịchebe mgbe niile site na njem ahịa mberede na ụzọ na-ezighi ezi. Ndị na-enweghị usoro njikwa ihe egwu dị egwu na-atụfu ego n'ikpeazụ.
Ọ bụrụ na ị kabatabeghị etu mgbasa na-arụ ọrụ - ị kwesịrị iji akaụntụ azụmaahịa na-azụ ahịa. E kwuwerị, mgbasa ahụ nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu n'ikike ị ga-enweta site na ahia. Ọzọkwa, mgbasa ahụ na-agbanwekarị na ụbọchị ahia, yabụ akaụntụ ngosi ga-egosipụta nke a n'ọnọdụ ọnọdụ ụwa.
Leverage bụ akụrụngwa nke ọtụtụ ndị ahịa nwere ọgụgụ isi na-eji, ebe ọ na-enye ha ohere ịkọbawanye ọnọdụ ha. Site na nke ahụ, ọ nwekwara ike ịkọbawanye mfu gị. Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-atụ aro ịnwale leverage site na akaụntụ azụmaahịa tupu ị tinye ego gị. N'ime nke a, ị ga - ahụ ma ọ dị mma na akụkụ dị njọ nke ịzụ ahịa na oke.
Anwale a Broka
N'elu ịbụ ezigbo ngwá ọrụ maka newbies iji mụta ụdọ nke azụmaahịa n'ịntanetị, akaụntụ ngosi nwekwara oke nhọrọ mgbe ọ bịara ịnwale onye na-ere ahịa ọhụụ. Nke a bụ n'ihi na ị ga - ahụ etu ọrụ ikpo okwu si arụ ọrụ n'ahịa ahịa na - enweghị mkpa itinye ego ọ bụla. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na usoro azụmaahịa akwụkwọ na-eweghachi nsonaazụ ọma, ịnwere ike ịhazi iji mepee akaụntụ zuru ezu.
Technicalmụta Nkà na ụzụ
Nchoputa nka na uzu bu otu n’ime ihe kacha mkpa ichoro ime ma o buru na ichoro ime ihe oma n’iru ahia gi. Maka ndị na-amaghị, nyocha ọrụ aka bụ usoro ọgụgụ eserese. Ebumnuche bụ isi bụ ileba anya na ọnụahịa ọnụahịa akụkọ ihe mere eme, yana etu usoro ndị a si emetụta ọnụahịa ugbu a na n'ọdịnihu.
Iji mezuo nke a, ọ ga-adị mkpa ka ị mụta ka ndị ọrụ aka ọrụ si arụ ọrụ. Nke a gụnyere ihe niile sitere na RSI, MACD, Bollinger Bands, na Fibonacci Retracement. Ezie na ị pụrụ n'ezie ịmụta ihe nkwupụta nke oru nyocha, naanị otu ụzọ dị mma iji meziwanye nkà gị bụ nwalee nyocha gị na ọnọdụ ahịa ụwa.
Kedu ụzọ kachasị mma isi mee nke ahụ karịa akaụntụ ahịa azụmaahịa? N’ụzọ dị oke mkpa, ị nwere ike ịmehie ọtụtụ ihe ọ bụla masịrị gị - dịka ị gaghị etinye ihe ọghọm ọbụla!
Nwalee usoro ohuru
Ka anyị were ya na ị bụ onye ahịa nwere oge nke na-azụ ma na-ere ego kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ bụ ezie na ị nweela ezigbo ihe ịga nke ọma, oge nwere ike ịbịa ebe ị kpebiri ịme ụzọ ọhụrụ. E kwuwerị, ahịa ego na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe, yabụ ihe rụrụ ọrụ ụnyaahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ taa.
N'iburu nke a n'uche, ọ bụrụ na mgbe ị kpebiri ịmalite ịrụ ọrụ na usoro ịzụ ahịa ọhụrụ, ị ga-achọ ịnwale nke a n'ụzọ dị egwu. Zọ kachasị mma iji mee nke a bụ iji akaụntụ azụmaahịa azụmaahịa. Nke a ga - enye gị ohere ịmegharị na ime mgbanwe dịka na mgbe ịchọpụtara na ọ dị mma.
Mgbe ahụ, mgbe ị chere na usoro ọhụụ gị adịla njikere ịmalite ịzụ ahịa na ụwa n'ezie, ị nwere ike itinye ya!
Allgba ahia ahia na-adọkpụ
Otu uru kachasị mma n'iji akaụntụ azụmaahịa bụ na ọ na-enye gị ohere ịnwale ọrụ mgbaàmà ọhụụ na-enweghị itinye ego ọ bụla. O doro anya, ịnwere ike ịchụpụ obere ego iji rụọ ọrụ ọrụ mgbaàmà maka ọnwa mbụ, mana karịa nke ahụ, ụlọ ọrụ akaụntụ ngosi ga-enye gị ohere ịnwale aro ndị ahụ tupu ịme nkwa ogologo oge.
Nke a bụ ihe anyị na Mmụta 2 Trade na-agba ume nke ukwuu maka ndị na-agụ akwụkwọ anyị. N’ụzọ dị oke mkpa, ọrụ mgbama ihu igwe anyị na mkpuchi mgbapụta na-abịa na nkwa iji nweta ego maka ụbọchị 30. Dịka, nke a na-enye gị oge zuru oke iji nwalee akara anyị site na akaụntụ azụmaahịa dị ndụ. Ozugbo ịmechara nyocha gị, ị nwere ike ikpebi ma akara ngosi ahụ ọ na-arụ ọrụ maka ebumnuche azụmaahịa gị ogologo oge. Ma ọ bụrụ na ha emeghị - nke ahụ dị mma, rịọ maka nkwụghachi zuru oke ma ọ gaghị efu gị ihe ọ bụla!
N'ọnọdụ ụfọdụ, akaụntụ azụmaahịa na-enye gị ohere ịnwale akpaaka trading usoro dika Forex robot na EAs (Expert Advisors). Ugbu a, ị ga-eji onye na-eweta ntanetị n'ịntanetị nke na-enye gị ohere ịnweta ikpo okwu MT4 ma ọ bụ MT5. Ọ bụrụ na ha, ị nwere ike mepee akaụntụ ngosi ma budata ngwanrọ MT4 / M5 na ngwaọrụ gị.
Mgbe nke ahụ gasị, ịkwesịrị ijikọ robot akpaghị aka gị na sọftụwia azụmaahịa. Ma ọ bụ ya - ngwanrọ ịzụ ahịa akpaaka ga-aga ahịa maka nnọchite gị. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na bot na-eme gị ego ma ọ bụ na ọ bụghị - dịka ị na-azụ ahịa akwụkwọ site na akaụntụ ngosi dị ndụ! Ọ bụrụ na ọ pụta na robot akpaaka dị mma na ihe ọ na-eme, ịnwere ike ịmefefefe na akaụntụ azụmaahịa ụwa.
Ngbu Ego Nke Akaụntụ Azụmaahịa
Dika akuko ahia ahia di - ha na - enweta otutu nsogbu. Na-ebute ụzọ nke a bụ echiche ụgha nke ịnọ ná ntụkwasị obi. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-eji akaụntụ ngosi maka ọtụtụ izu - ma karịa oge ule ị mere nlọghachi nke 45%.
Onye ahia na-enweghị uche ga-agabiga onye na-ere ahịa na ya, mepee akaụntụ azụmaahịa n'ezie, ma tinye ego. Iche echiche na ahia n'ịntanetị bụ ikuku, mgbe ahụ, ha ga-eleba anya na ịmeghachi ihe ịga nke ọma ha zutere site na ụlọ ọrụ akaụntụ ngosi ha.
N'eziokwu, atụmatụ dị otú ahụ agaghị aga nke ọma. N'ụzọ dị oke mkpa, mgbe ị na-eji akwụkwọ ngosi ego na-azụ ahịa, ọ ga-abụrịrị na ị ga - etinye ihe egwu ị na - agaghị anọ na gburugburu ụwa. Nke a bụ n'ihi na ịnweghị ike ịnwe ego mgbe ị na-azụ ahịa akwụkwọ, yabụ ihe ọ bụla ị hụrụ na ihuenyo bụ aghụghọ.
Mmetụta mmetụta uche nke Trading
Ma ọ bụ onye ahịa ọhụụ ma ọ bụ onye na-etinye ego n'oge nwere ọtụtụ afọ nwere ahụmịhe n'okpuru eriri ha - ndị ahịa niile ga-enweta mfu. Nke a nwere ike ịbụ ọnọdụ oge ụfọdụ nke na-emegide ha, ma ọ bụ ọtụtụ izu ma ọ bụ ọnwa na-acha ọbara ọbara. Kedu ụzọ ọ bụla, ọghọm bụ naanị akụkụ na ntinye nke ọnọdụ itinye ego n'ịntanetị.
Ugbu a, ndị na-eme ya na oghere ahia maara otu esi emeso ọnwụ ndị a. Nanị ihe ha mere bụ ịmụta ihe site na mmejọ ha wee gaa ahịa ọzọ. Agbanyeghị, ndị ọchụnta ego ọhụụ ga-eme ihe megidere ya. Nke ahụ bụ ịsị, onye ahịa ahụ ga-amalite ime mkpebi ndị ezi uche na-adịghị na ha ma nwee nnukwu ihe ọghọm - na - ebutezi iwe ọkụ na akaụntụ.
Isi ihe dị ebe a bụ na akaụntụ azụmaahịa akwụkwọ agaghị ewebata mmetụta mmetụta uche nke ịzụ ahịa. Chọpụta, ị ka ga-enweta ọghọm na akụrụngwa akaụntụ ngosi gị - mana, nke a agaghị enwe mmetụta dịka ịkwụsị ego ụwa. N'iburu nke ahụ n'uche, ị ga-amata ins na outs nke 'azụmaahịa akparamaagwa' ozugbo ị ga-azụ ahịa na isi obodo gị.
Etu esi ahoputa akwukwo ahia ahia?
Ya mere ugbu a na ịmara ma uru na ọghọm nke azụmaahịa akwụkwọ, ugbu a ọ dị mkpa ka anyị tụlee usoro ịhọrọ usoro ikpo okwu.
Site na ọtụtụ narị ndị na-enye ọrụ na-arụ ọrụ na oghere, ịmara akaụntụ ngosi ngosi nke imeghe nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Dịka, jide n'aka na ị tụlere ntuziaka ndị edepụtara n'okpuru.
Họrọ maka ore ahia nke ichoro iji
Dịka anyị kwuru na ntuziaka anyị niile, ịkwesịrị iji onye na-ere ahịa n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepe akaụntụ azụmaahịa. Nke a bụ n'ihi na ị ga - emeghachi ọnọdụ ọnọdụ ụwa. Dịka ọmụmaatụ, ebe ọnụahịa GBP / USD nwere ike ịbụ 1.2200 na onye na-ere ahịa A, ọ nwere ike ịdị elu karịa 1.2240 na broker B.
Site na nke a, ị ga-emepe naanị akaụntụ ngosi na onye na-ere ahịa n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ị bu n'obi iji ikpo okwu mgbe ị na-eji ezigbo ego azụ ahịa. Ka emechara, ọ dịghị ebe nọrọ izu on-ọgwụgwụ anwale a akwụkwọ trading atụmatụ si na a ore, ka ịgbanwee agbanwe na a gasịrị ụbọchị. Ọ bụrụ na ịmee, ị nwere ike ịchọpụta na onye na-ere ahịa na-arụ ọrụ n'ụdị dị iche na nke akaụntụ ngosi gị.
Real-World Trading Ọnọdụ
O doro anya na ị ghaghị ijide n'aka na akaụntụ ịzụ ahịa akwụkwọ ị họọrọ na-enye ọnọdụ ahịa ụwa n'ezie. Ọ bụrụ na o meghị ya, mgbe ahụ ọ ga - emeri ebumnuche kachasị elu. N'ụzọ dị oke mkpa, ma ị bụ onye ọhụụ ọhụụ na-achọ ịmụ ka esi azụ ahịa na-arụ ọrụ ma ọ bụ onye na-etinye ego n'oge nwere olile anya ịnwale-ịkwọ ụgbọala ọhụrụ ụgbọ ala - isi ihe bụ na ịchọrọ ịmeghachi ọnọdụ ahịa.
Fọdụ ndị na-ere ahịa na ntanetị ga-etinye njedebe na oge ị nwere ike ịzụ ahịa site na akaụntụ ngosi. Nke a bụ echiche nke ime ka ị gbanwee mgbanwe ya na ezigbo akaụntụ azụmaahịa. Site na nke ahụ, ị ​​nwere ike ịchọrọ n'ikpeazụ ụbọchị 30 iji nwalee ikpo okwu, yabụ kpachara anya iji chọpụta oge onye na-ere ahịa na-adị njikere inye gị tupu ewepụ akaụntụ ngosi.
Ngosipụta Akaụntụ Demo
Ikwesiri inyocha ihe itule akwukwo ahia ahia na-abịa. Nke a ga - ahụ na enyere gị ‘ego’ zuru oke iji nwalee usoro gị. Offọdụ n'ime ndị na-eweta akaụntụ azụmaahịa kachasị mma nke anyị kwadoro na ibe a na-enye gị mmalite mmalite nke opekata mpe $ 50,000.
Ozugbo ị kpuchie isi, mgbe ahụ ịkwesịrị ịchọpụta ụdị ngwa ọgụgụ eserese ụlọ ọrụ azụmaahịa na-abịa. Ihe nchoputa nka nka dika RSI na MACD inodu na isi ahia nke ntaneti, ya mere odi nkpa na enyere gi ihe di nkpa iji nwaa uzo gi.
A họrọ ọtụtụ nke online agbanwe ga-arịọ gị ka itinye a ịkwụ ụgwọ usoro - ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ezube na iji demo akaụntụ owuwu. Ọ bụ ezie na onye na-ere ahịa nwere ike ime nke a iji nye ndị mmadụ ohere imepe ọtụtụ akaụntụ, anyị na-ezerekarị nyiwe na-arịọ gị ka ị gbakwunye debit / kaadị akwụmụgwọ. Ka emechara, otu n’ime isi ihe mere akwụkwọ akwụkwọ ahia bụ nwalee si ore tupu eme a ego nkwa!
Etu esi amalite na Akaụntụ Azụmaahịa
Na-achọ ịmalite site na akaụntụ ahịa akwụkwọ taa, ma ejighị n'aka ebe ị ga-amalite? N'okpuru ị ga-ahụ a nzọụkwụ-site-zoo ndu na ike na-enweta gị a ngosi akaụntụ n'elu ikpo okwu na nkeji!
Nzọụkwụ 1: Họrọ Onye na-ere ahịa na ntanetị
Ebe mbido ọdụ ụgbọ mmiri mbụ gị ga-abụ ịchọta onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke na-enye akụrụngwa akaụntụ azụmaahịa. Kwesịrị ileba anya na ihe ndị ọzọ iji chọpụta ma onye na-ere ahịa n'ịntanetị ọ dị mma maka gị. Ka emechara, ị kwesịrị isonyere a akwụkwọ trading n'elu ikpo okwu ma ọ bụrụ na i bu n'obi iji ore ahia na a gasịrị ụbọchị.
Offọdụ ihe ị kwesịrị ile anya bụ:
Kedu akụ nke onye na-ere ahịa na-enye gị ohere ịzụ ahịa?
Olee otu asọmpi bụ onye na-ere ahịa mgbe ọ bịara gbasara mgbasa, ụgwọ, na ọrụ?
Kedu usoro ikikere nke onye na-ere ahịa na-ejide?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ itinye aka na azụmaahịa akpaaka, onye na-ere ahịa na-akwado MT4 / 5?
Onye na-ere ahịa na-enye nkwado ndị ahịa kachasị elu?
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyochaa onye na-ere ihe n'ịntanetị n'onwe gị, mgbe ahụ ị ga-ahụ ndị na-enye akwụkwọ edemede akwụkwọ kacha elu edepụtara edepụtara na njedebe nke ibe a.
Kwụpụ 2: Mepee Akaụntụ Ngosi
Ozugbo ịchọtara onye na-ere ahịa n'ịntanetị kwesịrị ekwesị, ị ga-emepe emepe akaụntụ. Nke a ga - achọ ka ị banye ụfọdụ ozi nkeonwe nke na onye na - ere ahia maara onye ị bụ. Echegbula - na ị nweghị ọrụ dị itinye ego ọ bụla - ma ọ bụ tinye mgbakwunye usoro ịkwụ ụgwọ maka okwu ahụ. Kama, ọ bụ naanị igbochi ndị ọrụ imeghe ọtụtụ akaụntụ azụmaahịa.
Ya mere, ị ga-achọ inye gị:
Kwụpụ 3: Họrọ Platform Trading
Ozugbo i mepee akaụntụ na onye ị họọrọ, ị ga-ekpebi ihe ikpo okwu azụmaahịa kachasị arụ ọrụ maka gị. N'ọtụtụ ikpe, ị ga-ahọrọ site na ikpo okwu ntanetị nke na-enye gị ohere ịnweta ebe ngosi site na ihe nchọgharị gị, ma ọ bụ ịnwere ike ibudata ikpo okwu dị ka MT4 / 5. Ọ bụrụ na ịhọrọ nke ikpeazụ, nke a ga-enye gị ohere ịnwale atụmatụ EA ma ọ bụ robot akpaghị aka!
Kwụpụ 4: Malite Akwụkwọ Trading
Ozugbo i buliri elu ahia gi ka ichoro ahia, i gha hu ihe ‘dummy’. Are nweere onwe gị ịhapụ ebe ịzụta na ire iwu. Dịka na mgbe ị mere, a ga-ewepụ ego ahụ na njikwa azụmaahịa gị. Kwesịrị ịnwa ịzụ ahịa dị ka a ga - asị na ị na - eji ego ụwa.
Anyị ga-atụ aro ịdebe taabụ na ndekọ akụkọ ihe mere eme gị. Nke a ga - akọwapụta uru na ọghọm gị, nke dị oke mkpa iji chọpụta ma usoro azụmaahịa gị ọ na - arụ ọrụ.
Nzọụkwụ 5: Nweta nkwalite na Akaụntụ Ezigbo Ahịa
Ọ bụrụ, ọ bụrụkwa na 'ọ bụrụ' na ịchọpụta na atụmatụ azụmaahịa gị na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịtụle nkwalite na akaụntụ azụmaahịa zuru oke. Ozi ọma ahụ bụ na ị nyelarị ozi nkeonwe gị, yabụ ihe ị ga - eme bụ bulite ụfọdụ NJ na akaebe nke adreesị. Nke a bụ opekempe ihe achọrọ na ndị na-ere ahịa n'ịntanetị, dị ka nyiwe dị mkpa iji hụ na ha ka na-ekwenye na iwu mgbochi ego.
Mgbe nke ahụ gasị, ị ga - etinye ego na kaadị debit / kaadị, e-obere akpa, ma ọ bụ akaụntu - ma ị ga-aga! Na nke ahụ kwuru, ọ bụrụ n'ịchọpụta na usoro azụmaahịa gị anaghị aga nke ọma na gburugburu ụwa, ị nwere ike ịtụle ịlaghachi na akaụntụ azụmaahịa gị. Nke a ga - enyere gị aka ịtụle ihe bụ -aga ezighi ezi na-efunahụ ego ọzọ.
Akwụkwọ Ntanetị kacha mma nke 2021
Havenweghi oge ichota aka ahia ahia akwukwo di elu? Ọ bụrụ otu a, n'okpuru ebe a ka ị ga-ahụ ndị na-eweta akaụntụ azụmaahịa anyị akwadoro nke 2021.
Onye ọ bụla na-eweta ọrụ bụ onye na-ere ahịa na-achịkwa nke na-enye ọtụtụ klas akụ - na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa akwụkwọ niile yiri nke ezigbo ahịa ahịa dị ka-maka-ka.
1. eToro - Akwụkwọ Ahịa Kachasị Mma Maka Ndị Mbido
Y'oburu na ibu ebum n'uche gi bu ichota uzo ahia nke akwukwo nke gha enyere gi aka imata uzo nke esi etinye ego n'igwe, anyi gha acho ichoputa eToro. Ihe ngosiputa nke onye oru n’enye ihe ngosi ihe omuma nke enwere ike inweta ya na nkeji. Naanị ezigbo Crypto dị na US.
Gha enwe ikike zuru, ire, na izu ahia otutu puku akụrụngwa ego na eToro. Nke a gụnyere ebuka, cryptocurrencies, indices, ETFs, commodities, na ego.
Y’oburu n’achoputa na eToro bu ezigbo ulo ahia ahia gi, ikpo okwu a n’enye gi ohere ibido n’eji $ 200. Nwere ike itinye ego na kaadị debit / kaadị, akpa ego, ma ọ bụ akaụntụ akụ na-akwụghị ụgwọ. N'ikpeazụ, eToro na-enyekwa atụmatụ ịzụ ahịa oyiri nke na-enye gị ohere ịdị ka pọtụfoliyo nke ndị ahịa ahịa.
Na nchịkọta, akwụkwọ ndekọ ahịa akwụkwọ dị mma maka ndị na-etinye ego na ụdị nha. Ọ bụrụ na ị na-amalite ụwa nke ịntanetị n'ịntanetị, ụlọ ọrụ ngosi ga-enye gị ohere ịmụ ụdọ tupu itinye ego gị n'ihe egwu. N'akụkụ nke ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, usoro ntanetị azụmaahịa dị mma maka ịnwale usoro azụmaahịa dị elu, yana EAs na igwe eji arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị dị njikere ime njem njem akwụkwọ gị malitere taa, anyị ga-atụ aro ka ị tụlee onye na-ere ahịa kacha elu Crypto Rocket. Usoro a na-achịkwa na-enye akụkọ ngosi ngosi nke gosipụtara nke ọnọdụ ọnọdụ ụwa-nke dị oke mkpa. Nke kachasị mma, ọ nweghị ihe achọrọ iji budata sọftụwia ọ bụla - dịka enwere ike ịnweta ihe niile site na ntanetị azụmaahịa.
Gịnị bụ ere akwụkwọ?
Tradingzụ ahịa akwụkwọ na-ezo aka n'usoro ịzụ ahịa site na akaụntụ ngosi. Ga-enweta ọnọdụ azụmaahịa nke ụwa na-enweghị mkpa itinye ego gị n'ihe egwu.
Achọrọ m itinye ego iji nweta akaụntụ azụmaahịa akwụkwọ?
N'ọtụtụ ikpe, ịkwesighi itinye ego ọ bụla iji nweta akaụntụ azụmaahịa akwụkwọ. Kama, ị ga - edebanye aha na akaụntụ gị na onye na - azụ ahịa ị họọrọ.
Nwere ike imeri ego site na akaụntụ azụmaahịa akwụkwọ
Ee e, ahia akwụkwọ bụ naanị usoro iji zụta na ire akụ na ego ‘akwụkwọ’. N'okwu Layman, nke a pụtara na ị na-azụ ahịa na ego adịgboroja wee si otú a - uru ọ bụla ị nwetara abụghị ezigbo!
Enwere m ike itinye ihe nkwụnye ego mgbe azụmaahịa akwụkwọ
Ee, akụkọ azụmaahịa na-egosiputa nke ezigbo ndekọ ego. Dị ka ndị dị otú a, ị ga-enwe ike ịnweta otu ngwaọrụ ndị a dịka ị ga - eji ezigbo ego na - azụ ahịa.
Kedu ihe na-eme ma ọ bụrụ na akaụntụ azụmaahịa m na-aga na efu?
Nwere ike ime ka itule nwee ume ọhụrụ ma ọ bụrụ na ịga na efu. Ọ bụrụ na nke a emee, ọ bụ ihe ngosi ọkụ na-egosi na ị kabeghị njikere ịzụ ahịa na ezigbo ego!
Kedu ka m ga-esi nweta nkwalite na akaụntụ azụmaahịa na ezigbo akaụntụ?
Ọ bụrụ n ’ị nyelarị onwe gị nkọwa nkeonwe gị na onye na-ere ahia, ị ga - ebufee ụfọdụ NJ na itinye ego. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịmalite ịzụ ahịa na ezigbo ego.
Enwere m ike mepee akaụntụ ngosi MT4 na-enweghị onye na-ere ahịa?
Mba, ị nwere ike iji MT4 naanị ma ọ bụrụ na ịnwere akaụntụ brokerage.